Shiinaha jumlada 4.5 ahama steel slider ahama iyo kuwa-saareyaasha - GRX DARYEELKA (HONG KONG) CO., LTD.
Hoyga > Madaxa jiinyeer > Ahama slider YG ahama > 4.5 Diidmada birta ahama
Qalabkan birta ah ee ahama ee 4.5YG wuxuu ka samaysan yahay 304 bir bir ah. Shirkadda ayaa maray ISO9001: 2008 shahaadada nidaamka maaraynta tayada.
4.5YG slider ahama
1. Soo bandhigida badeecada ee 4.5YG slide ahaaneed
This 4.5YG slider ahama is made of 304 stainless steel. The company has passed ISO9001: 2008 quality management system certification.Waxay leedahay shatiyado badan waxayna soo bandhigtay nidaam maamul oo tayo leh oo alaab ah. , Si isdaba joog ah u hagaajiya qalabka iyo qalabka kala duwan ee softiweerka, isla markaana ku dadaalaya inay suuqa ku qabsadaan tayo.
2. 4.5YG slider ahama product parameters (specifications)
Cabirka gudaha gudaha: dhererka afka: 2.05-2.15MM
Baaxadda afka: 4.35-4.45MM
Dharka tolida: 0.8-0.9MM
3. Waxyaabaha astaamaha iyo codsiyada waxsoosaarka4.5YG birta ahamar
Tilmaamahan birta ah ee birta ah ayaa badanaa loo isticmaalaa jiinyeerrada jiinis, oo ka faa'iideysanaya qiimaha naxaasta ah.
4. Faahfaahinta alaabta ee 4.5YG birta birta ah ee birta ah
Bogtadaani waxay hagaajin kartaa culeyska unugga (sida 780 kumbiyuutarro / KG, 860 kumbiyuutar / KG) iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamilka, iyo ku dar LOGO uu macmiilku u baahan yahay.
5. U qalmida alaabada ee 4.5YG slider ahama
6. Baakadaynta iyo rarka dhogorta birta birta ah ee 4.5YG
Calaamadaha kulul: 4.5 Qalabka aan xarka lahayn ee birta ah, Shiinaha, Jumlada, Jumlada, Alaab-qeybiyeyaasha, Soosaarayaasha